KUNGABONIWE: ipulatifomu entsha yokuphathwa kwedatha yendawo - iGeofumadas
KUNGABONIWE: ipulatifomu entsha yokuphathwa kwedatha yendawo
Mashi, 2021 eziningana
Ohlelweni lwesi-6 lwe- Umagazini weTwingeo, sikwazile ukunambitha lokho okuhlinzekwa yipulatifomu entsha yokuphathwa kwedatha yendawo IStudiyo Esiveziwe. Le ngxenyekazi entsha kusukela ngoFebhuwari 1, 2021 ibinikeza abantu ukukhuluma ngamathuluzi angaba khona awanikezelayo okuphatha nokuphatha amasethi wedatha enkulu yendawo.
Ikhuluma ngokuthi abadali bayo baqala kanjani ukuthuthukisa le phrojekthi yaze yavela ku-Unfolded, ngokususelwa kubuchwepheshe bemithombo ye-geospatial evulekile njenge-kepler.gl, deck.gl ne-H3. Ipulatifomu inhloso yalo enkulu ukuphatha ngempumelelo i-Big Data, enokwakhiwa kokuphela kokuphela kanye nemijikelezo yokuphindisela esheshayo ukucubungula amasethi wedatha amakhulu. Indlela eyinhloko isuselwa kumakhono wegridi enamacala ayi-H3.
Le gridi ye-H3 uhlelo lokukhomba nge-geospatial, futhi ngalokhu ubuso bomhlaba buhlukaniswe ngamathayili wohlobo lwama-cell wokulandelana, ngalinye lalawa maseli lingahlukaniselwa amanye njalonjalo. Yakhiwa i-Uber ngokubona nokwenza kahle idatha yendawo, kanye nokuphathwa kwemakethe enamandla - yokuphakelwa kanye nokufunwa.
Ku-Unfolded ungakha amamephu ngokuchofoza okumbalwa, futhi kusuka kusiphequluli. Ngezici eziyisisekelo eziyisishiyagalombili, i-Unfolded Studio ivumela:
Dala amamephu ngokuzikhandla
Isibonisi esihle sokuhlola
Ukuhlaziywa okunamandla kwe-geospatial ukusiza abasebenzisi ukuthola imininingwane
Isitoreji samafu sedatha ye-geospatial
Ukuchofoza okukodwa kwemephu
Ukufakwa okulula kwamafomethi wedatha ye-geospatial
Ukuzenzakalela ukuthola idatha ngaphakathi nangaphandle kwethuluzi
Izindlela zokwenza izinhlelo zokusebenza ngokwezifiso kumamephu
Abasunguli abangenziwanga u-Isaac Brodsky, u-Ib Green, uShan He, no-Sina Kashuk bebelokhu besungula ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-geospatial njenge-kepler.gl, i-deck.gl, ne-H3 isikhathi esingaphezu kwengxenye yeshumi leminyaka futhi manje sebehlanganyele ekuvuseleleni ama-geospatial analytics.
Kusuka ku-akhawunti yakwa-Google noma ngokufaka i-imeyili, iphrofayli iyakhiwa ukuqala ukwenza amamephu. Ngokufanayo, kungenzeka ukuxhuma izindawo zokusebenza noma amathuluzi wokuphatha weqembu afana ne- "Slack". Ngokunjalo, kukhona iphaneli yokuphatha idatha efwini, yonke idatha elayishwa epulatifomu iyimfihlo, kuze kube yilapho umsebenzisi edinga ukuyaba nge-URL, ingxoxo, i-imeyili, isithombe-skrini noma inethiwekhi yokuxhumana nabantu (i-twitter, i-LinkedIn, i-Facebook noma i-Reddit ).
Amakhasimende webhizinisi angafinyelela kwimininingwane engafakwanga yesikhulumi ngeDatha SDK - i-REST API - ngesiphequluli sewebhu noma ngemiyalo ethile. Le SDK inika amandla ukuhlanganiswa kwamamephu, idatha, izinsizakalo nokugeleza komsebenzi. Ibuye isize ukwenziwa kwamamephu ashicilelwe, ukusebenzisana noma izitayela futhi inikeze ukulawula phezu kwedatha ekhonjiswayo noma cha emephini.
Lapho usebenzisana nepulatifomu, isikhombimsebenzisi nokusebenza okukuhlinzekayo kuyachazwa, kanye nokwehluka kwawo nge-GIS yedeskithophu yendabuko efana ne-ArcGIS noma i-QGis ngokwesibonelo. Ihlanganisa wonke amandla we-GIS ejwayelekile nobuchwepheshe obusha nobusha.
I-Studio engafakwanga ayihloselwe amacala wendabuko we-GIS. Igxila ekuhlaziyweni kwedatha enkulu nasekuxazululeni izinkinga ezinzima ze-geospatial ngokombono wososayensi nabahlaziyi bemininingwane.
Izici ezinjengokuhlaziywa kwesikhashana zichaziwe, zibalulekile uma unedathasethi eyodwa noma eziningi futhi ufuna ukubona ngamehlo enguquko ngendlela esheshayo nephilayo. Ngokunjalo, nethuba lokugqwayiza lokhu kuhlaziywa kwesikhashana nalo lifakiwe endaweni yesikhulumi.
Ngokufanayo, inothi lishiywa lapho abasunguli be-Unfolded bexhumana nabasebenzisi babo ukuthola kubo impendulo engcono ekusebenzeni kwepulatifomu. Ngokunjalo, baqhubeka bezama ukuze bafake amathuluzi amasha noma izici ezenza ukuthi isipiliyoni sibe sesinothisa kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, kulabo abasha ku-Unfolded, banethuba lokubuyekeza okokufundisa okuhambisana nalokhu: ukufaka idatha kumamephu, ukuhlola idatha, inyunyana yedatha noma ukugqwayiza. Kuyisiteji esithembisa ukuletha isimanga esikhulu emphakathini wabahlaziyi bemininingwane yendawo.
Akudingekile ukukumema ukuthi ufunde lolu hlelo olusha lweTwingeo Magazine. Siyakhumbula ukuthi sikulungele ukuthola amadokhumende noma okushicilelwe ofisa ukukukhombisa kumagazini. Xhumana nathi nge-imeyili editor@geofumadas.com kanye edit@geoingenieria.com.. Lo magazini ushicilelwa ngefomethi yedijithali -kuhlole lapha- Ngabe ulindeni ukulanda i-Twingeo? Silandele ku-LinkedIn ukuthola ezinye izibuyekezo.
Thumela Previous«Langaphambilini IDiploma - Isazi Sokwakhiwa KweBIM
Post Next Izindaba zezamabhizinisi. Ukulele.comOkulandelayo »